Taranja bisikileta :: Lasibatry ny valanaretina ny andavanandron’ireo mpivoy • AoRaha
Tsy naharenesam-peo firy noho ny valanaretina Covid19 ihany koa Federasiona malagasin’ny hazakazaka am-bisikileta. Miankina tanteraka amin’ny fivahan’izao olana ara-pahasalamana izao vao hiverina amin’ny laoniny ny taranja fivoizana bisikileta.
Voasakana hatramin’ny fanazarantenan’ireo mpivoy satria eny an-dalana no tena fanaovana an’izany, na dia misy aza ireo fitaovana azo ampiasaina ao an-trano, nefa tsy ahafahana manoatra ny fepetra ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana.
« Miandry ny fisokafana sy ny fiverenana amin’ny laoniny vao afaka mihetsika izahay », hoy Relahy Jean Claude, filohan’ny Federasiona.
Nohamafisiny fa tsy maintsy hojerena aloha ny toedraharaha misy ary indrindra ny fomba hahafahana manatanteraka hetsika. Miankina amin’ireo rehetra ireo no fahafahan-dry zareo mamolavola fandaharam-potoana ho an’ireo fifaninanana samihafa. Eo koa ny tosika avy amin’ireo mpanohana sy ny malala-tanana.
« Taranjam-panatanjahantena atao eny an-dalambe ny hazakazaka am-bisikileta. Tsy misy vidim-pidirana fa mivoaka eny amin’ny arabe fotsiny ny olona sy ireo mpankafy dia manaraka ny fifaninanana. Entina hilazana izany fa tena mila tanteraka an’ireo mpanohana ny Federasiona », hoy ihany Relahy Jean Claude.
Baolina kitra – Fanazarantena :: Manomboka miverina an-kianja ireo mpilalaon’ny Barea
Fifaninana mitanisa baolina :: Tafakatra amin’ny dingana manaraka i Fyarivelo